DFP : “Tokony ho fiaraha-mitantana ny firenena no atao izao” | NewsMada
DFP : “Tokony ho fiaraha-mitantana ny firenena no atao izao”
Nitondra vahaolana manoloana ny raharaham-pirenena ny Dinika ho fanavotam-pirenena (DFP). “Tokony ho fiaraha-mitantana ny firenena no atao izao”, hoy ny mpitarika Ratolojanahary Maharavo.
“Tokony ho fifanarahana amin’ny fiaraha-mitantana ny firenena no atao izao. Inona sisa no fahefana aman’andraikitra hapetraka amin’io filoham-pirenena io, raha mbola tiana havotana sy jerena ny lamina araka ny lalàmpanorenana.”, hoy izy. Fanovana ny fomba fitantam-panjakana no tokony hapetraka eto.
Isaorany ny Bianco sy ny SMM tamin’ny fiantsorohana andraikitra manoloana ny “Raharaha Razaimamonjy Claudine”. Tena hoe hetsika sendikaly araka ny tokony ho izy ny nataon’ny SMM.
Noho ny fiaraha-miasan’ny Bianco sy ny SMM, nifoha amin’ny torimasony koa ny fiombonambe iraisam-pirenena. “Izahay ihany no efa nilaza fa andao hampidirina amin’io raharaha io ny iraisam-pirenena, fa tsy ho vitantsika sendikalista sy olona tsara sitrapo irery ny miady amin’ireo adala matanjaka manana fahefana ireo”, hoy izy.
Amin’izao fotoana izao àry, noho ny fiaraha-miasan’ny fiombonambe iraisam-pirenena, indro fa naverin’ny governemanta maorisianina Razaimamonjy Claudine. Tsy vitan’ny SMM na ny DFP na ny Bianco samy irery izany, fa misy ny fidirana sy ny fiaraha-miasan’ny fiombonambe iraisam-pirenena.
“Mino izahay fa raha mitohy izao, voaavotsika ihany ity firenentsika ity”, hoy ihany izy.